Fiangonana vaovao no tsangambaton'ny faha 100 taonan'ny EKAR Masindahy Zozefa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
﻿Cathy il y a 4 années
Fiangonana vaovao no haorina ary mahazaka olona hatramin'ny 1600 no tsangambaton'ny faha zato taonan'ny EKAR Masindahy Zozefa ao Andaingo. Tonga tany an-toerana andro vitsivitsy i Mgr Gaetano Di Pierro, evekan'ny diosezin'i Moramanga, nanamarika izany fotoana izany. Sorona Masina notarihin’i Mgr Gaetano Di Pierro tamin'ny alahadin'ny Pantekoty no namaranany ny fitsidihana.
Sakramentan'ny mariazy sy ny fankaherezana
Noraisina tamin’izany ireo mpivady nandray ny sakramentan'ny mariazy ary ireo tanora 50 mianadahy nandray ny sakramentan'ny fankaherezana. Manana zanam-piangonana 20 amin'izao fotoana izao ity distrika ity izay ny Evekan'ny diosezy amin'izao fotoana no nanangana azy ho distrika tamin'izany fotoana izany. Ity fotoana ity ihany koa no nanentanan’ny eveka ireo ray aman-dreny ho tia an'i Jesoa no sady hanam-pitiavana sy ho tia vavaka. Satria azo antoka fa raha feno ireo dia na ny fiangonana aza dia ho feno satria ny olona mahafeno ireo fepetra ireo no afaka mampandroso. Tsy ampy fandalinam-pinoana ny ankamaroan'ny tanora ankehitriny, hoy i Mgr Gaetano Di Pierro, ka niantso ny kristianina katolika rehetra izy ny hananany fahasahiana mijoro amin'ny finoany. Noentaniny ireo tanora manao tokantrano maso mba hiroso amin’ny fanaovana mariazy, eo anatrehan'Andriamanitra. Tonga nanao ny fanentanana teny an-toerana ireo filoha sy Fanilon'i Madagasikara ato anatin'ny diosezy.
Natolotra teo imason'ireo kristianina tonga maro fa ny pretra mitondra amin'ity distrika ity dia aomonien’ny Fanilo ato anatin'ny diosezy. Ny taona 2014 no feno 100 taona ity fiangonana ity, 12 metatra ny sakany ary 15 metatra ny lavany tamin'ny taona 1914. Tamin’ny 11 jiona 1915 no nisy ny batemy voalohany tao izay miisa 3. Eo am-panatanterahana ireo fiaraha-mientan'ireo kristianina rehetra ny lehiben'ny fanorenana ankehitriny.